Hal Sano oo Grapperhaus ah: 'Baaxadda Weyn ee Dhibaatada Daroogada Way I Naxday' • Dawooyinka Inc.eu
Grapperhaus muddo hal sano ah: "Dhibaatada weyn ee dhibaatada daroogadu way i cabsiisay"
Ferdinand Grapperhaus ku saabsan sanadkiisii ​​ugu horeeyay ee Wasiirkii Cadaaladda iyo Amniga iyo soo galitaanka isaga oo ah meel ka baxsan magaalada hoose ee Hague. (wareysi)
1 Ma la isticmaali karaa anshaxyada siyaasadeed?
2 Waxaad moodaa inaad taxaddar badan leedahay. Waad qori jirtay in Alexander Pechpedia uu ahaa hawo cimilo iyo Geert Wilders waalli. Ma aragno wax badan oo ka mid ah fikradaha noocaas ah ee cad hadda.
3 Ma sidoo kale maadaama aad ahayd wasiirkii afaraad ee caddaaladda sideed sano?
4 Waxaad ku difaaceysaa miisaaniyaddaada baarlamaanka todobaadkan. Halkee ayaa farahaaga saaran yahay?
5 Ma jiraa xiriir toos ah oo u dhexeeya 'kiniin inta lagu jiro dhamaadka usbuuca waa inay suurta gal noqotaa' iyo duqa Haarlem oo heli waayey Sinterklaas hanjabaad darteed?
6 Miyay tahay inaan arinkani aragno sida Dagaalkaaga Daawooyinka?
7 Waxa kale oo jira shaki ah in haddii dhibaatadu dhab ahaantii weyn tahay. Miyuu ku fashilmay in uu ka hadlo warshad ku saabsan bilicda 19?
8 Laakiin isla markaa sida muuqata dhammaan noocyada kala duwan ee 'Escobars polder' ayaa halkan ku wareegaya ...
9 Taasi sidoo kale waa dembi daroogo?
10 Waxaan sidoo kale akhrinaa in dadku ay ka faa'iideystaan ​​sidaas darteedna ay xiraan afkooda.
11 Waxaad bilaabeysaa Dagaal ka dhan ah Maandooriyaha isla markaana isla markaa golaha wasiiradu waxay ku bilaabayaan tijaabo daroogo leh weed gobolka ...
12 Ma aha dambi ka danbeeya wadajirka? Sidee ayay taasi uga dhex muuqataa caalamka?
Wuxuu qareen ahaan uga soo shaqeeyey Amsterdam noloshiisa xirfadeed wuxuuna noqday gudoomiyaha gudiga Nederland ee shirkada caalamiga ah ee ka shaqeysa Allen & Overy. Sharciga shaqaalayntu waa takhasuskiisa, marka laga reebo taas wuxuu jeclaa inuu soo bandhigo aragti bulshada ku saabsan qaybaha ra'yiga. Waxay ahayd wax yar oo iska cad inuu sidoo kale xubin ka ahaa CDA oo muujiyey inuu diyaar u yahay xisbiga sare si loogu beddelo siyaasadda.
Haatan Ferdinand Grapperhaus (59 jir) ayaa muddo dheer sannad ka sarreysay munaaradda Hague ee Caddaaladda iyo Amniga. Isagu waa mid ka mid ah dadka dibada ka jooga ee ku yar Rutte III, golaha wasiirada oo inta badan ka kooban dad xog ogaal ah. Daraasaddiisa waxaa lagu diyaariyey guriga dhexdiisa. Sawirrada carruurta iyo xaaskiisa dhimatay oo ku dheggan gidaarka, sawir gacmeed saaxiibkiis miiska saaran. Jacaylka majaajillada ah ee ku jira isaga ayaa diidi kari waayey in meel walba la dhigo qalabka Tintin.
Wuxuu shaqeeyaa rubuc-iyo-toddobo subaxnimo, marka gaariga rasmiga ah uu soo galo Amsterdam-Zuid, illaa tobanka fiidnimo wuxuuna qaataa oo keliya qayb ka mid ah mushaharka uu ku qaatay xirfadda sharciga. "Taasi ma ahayn tixgelin," ayuu yidhi. Maxay tahay wax soo jiidasho leh: ololaha dhalaalaya ee fedora badanaa waa siyaasi taxaddar leh oo ka tirsan baarlamaanka oo ka labalabeeya sameynta. Taas oo inta badan keenta fal-celin kulul oo kaga timaadda mudanayaasha baarlamaanka.
Ma la isticmaali karaa anshaxyada siyaasadeed?
Guud ahaan, waxa laga hadlayo ayaa laga doodayaa. Had iyo jeer waxaan dhagaystaa doodaha mararka qaarkoodna waxaan ku soo gabagabeeyaa inaan dib u eego wax markale. Kaliya haddii qof sida Mr Kuzu oo kale (Ka fikir xubin baarlamaanka ka tirsan, ed.) wuxuu yimaadaa xagga hore wuxuuna ku qayliyaa inay wada qaniinyo tahay, adigoon wax dood ah bixin, waxaan u maleynayaa: waa maxay taasi?
Waxaad moodaa inaad taxaddar badan leedahay. Waad qori jirtay in Alexander Pechpedia uu ahaa hawo cimilo iyo Geert Wilders waalli. Ma aragno wax badan oo ka mid ah fikradaha noocaas ah ee cad hadda.
Ka wasiir ahaan waa inaanan mari wadadaas, laakiin inaan ku mashquulo faylashayda. Marka la eego, shahaadooyinkaas waxaa laga saaray macnaha guud, waxay la xiriireen u wareejinta mowduuc mowduuc gaar ah A ilaa Z. Weli fikrado ayaan ka haystaa taas, laakiin hadda waxaan haystaa door kale. '
Ma sidoo kale maadaama aad ahayd wasiirkii afaraad ee caddaaladda sideed sano?
Waxaan u maleynayaa inay taasi tahay doqonimo. Ivo Opstelten wuxuu halkan joogay shan sano. Stef Blok ayaa arkay. Kaliya Ard van der Steur ayaa si kooban halkaan u joogay, laakiin muuqaalka ka soo baxay isaga ayaan cadaalad u samaynaynin. Waxay wali wax ka weydiiyaan shirarka Yurub. '
Waxaad ku difaaceysaa miisaaniyaddaada baarlamaanka todobaadkan. Halkee ayaa farahaaga saaran yahay?
Qaabkeyga ku wajahan dembiyada wiiqaaya ee ka dambeeya soo saarista iyo isticmaalka daroogada. Waa inaan ka eegnaa muraayada. Heroinku wuu ku dhowaaday inuu dhinto, laakiin daroogooyinka kale ee ka tirsan qaybta ugu culus ee Xeerka Opium (kookayn, amphetamine, ecstasy iyo ghb, ed.) waa inaan noqono kuwa aad u adag. Dambiga la socda wuxuu ku dhex degaa muwaadiniinta caadiga ah wuxuuna saameeyaa bulshada. '
Ma jiraa xiriir toos ah oo u dhexeeya 'kiniin inta lagu jiro dhamaadka usbuuca waa inay suurta gal noqotaa' iyo duqa Haarlem oo heli waayey Sinterklaas hanjabaad darteed?
'Taasi waa mid aad u adag, laakiin ma dhaawaceyso in la ogaado in kiniinkaas aad ku sii hayso warshad ballaadhan oo ka socota adduunka oo dhan. Waxaan u maleynayaa in Arjen Lubach uu aad u qosol badan yahay, waxaan jeclahay inaan daawado barnaamijkiisa, laakiin kuma raacsani marka uu igu yiraahdo waxaan sharciyeyn karnaa ecstasy. Wuxuu u maleynayaa in heshiisyada caalamiga ah la tuuro, ama sidee buu markale u sameeyay taasi? (Lubach wuxuu yiri waad ku masaxi kartaa dameerkaaga taas, ed.Dabcan sidaas uma shaqeyso. Waxaan leenahay runtii dhibaato weyn oo caalami ah. Waxaan halkan ka bixinnaa dhammaan Australia. Miyaanay waalli ahayn in aynu dalkan ku leenahay warshad aad u ballaadhan?
Miyay tahay inaan arinkani aragno sida Dagaalkaaga Daawooyinka?
Sida Dagaal ka dhan ah Ururada Dembiyada, taasi waa hal shay. Iyo laba: kookaha iyo daroogada macmalka ah waa inay dalka ka baxaan. '
Waxa kale oo jira shaki ah in haddii dhibaatadu dhab ahaantii weyn tahay. Miyuu ku fashilmay in uu ka hadlo warshad ku saabsan bilicda 19?
Pieter Tops, oo ah borofisar ku takhasusay maamulka dowladeed, ayaa sheegay in soosaarayaasha Nederland ay leexsadaan 600 milyan. Laakiin taasi waxay ka dhigan tahay qiimaha waddada oo dhan 19 bilyan oo adduunka ah, maxaa yeelay inta badan waa la dhoofiyaa. Dadka qaar waxay dhahaan taasi sax ma noqon karto. Laakiin haddii aad eegto tirada shaybaarrada daroogada ee la kala diray sannadihii la soo dhaafay, waxyaabaha lagala wareegay, doomaha iyo baabuurta, qiimaha waddada ee maandooriyaha loo helay bakhtiya, runti waa tiro aad u tiro badan. Waan ogaa inaan dhibaato haysan, laakiin waan ka naxay baaxadda. Way weyntahay.
Noocan dembiga ah wuu adkaaday oo abaabulay sanadihii la soo dhaafay. Ka fikir OMG-yada, mootooyinka sharci darrada ah ee mootooyinka, mocromafia, duminta qaabdhismeedka dhacaya. Xaafadaha ku yaal Eindhoven, Tilburg, Arnhem, Rotterdam ayaa lagu soo rogay dambiga noocan ah.
'Ma ogtahay waxa aan arko? Guri u adeegta sidii meel lagu kaydiyo kiniiniyada casaanka iyo cagaaran, guri ay haleeshay rasaas maxaa yeelay nin daroogo ah oo daroogo ayaa halkaas ku dhuumanayay, garaash leh shaybaarka dawada. Taasi waxay ku koraan dukaanka Enschede usbuucii la soo dhaafay: waa isku mid. Waxay ahayd uun guri ku yaal xaafad la degan yahay ...
Aad ayaan uga walaacsanahay arrintan, sababtoo ah ma saameynayso dadka ku nool Zuidas ama dadka ku nool Aerdenhout. Xaqiiqdii waxay saameyn ku yeelaneysaa dadka durba ku jira dhinaca bulshada ugu adag. '
Waa farriin is khilaafsan: dhinacna, waxaa naloo sheegay in dembigu sannad kasta hoos u dhacayo ...
Taasi waxay ku saabsan tahay dambiyada culus. Dhaca, dhaca jidadka, guryaha laga dhaco… '
Laakiin isla markaa sida muuqata dhammaan noocyada kala duwan ee 'Escobars polder' ayaa halkan ku wareegaya ...
Hagaag, ma raacday tijaabadaas ka dhanka ah Klaas O.? Haddii aad akhrido warbixinnada dhageysiyada, miyaanay ahayn wax laga naxo? Dambigaas naxariis darrada ah. Qaado wiilkaas, samafalahaas wanaagsan, oo si kadis ah loogu toogtay Wittenburg ee Amsterdam. Ama walaalkii markhaati taaj oo si fudud xafiis maamul u lahaa. Sidoo kale weerarkaas oo lala beegsaday gantaalkaas xafiiska tifaftirka ee Panorama iyo kan fuushanba kan wax ka sheega De Telegraaf Si dhab ah ayaan u qaatay.
Taasi sidoo kale waa dembi daroogo?
'Ku toog dhismo wariyeyaasha leh gantaal risaasta, meel kasta oo ay joogaan Beau Monde si kastaba ha noqotee muujinta dambi adag, oo aan damiir lahayn. Iyo ururada ka dambeeya, waxaan ku arkaa booqashooyinka shaqada, inay ka shaqeeyaan waddo fudud oo xaafad ah oo ay ku nool yihiin dad aan la siinin dhammaan qodobbada farxadda nolosha.
Waxaan sidoo kale akhrinaa in dadku ay ka faa'iideystaan ​​sidaas darteedna ay xiraan afkooda.
'Maya, badanaa wax faa'iido ah kama helaan! Waa quraafaad in urur noocaas ahi ku dhaho qof kasta oo xaafadda ah: ka faa'iideyso. Sidaas uma shaqeyso. Dadku way ku xanuunsadaan, waa la baqay. Noloshu way sii xumaataa. '
Waxaad bilaabeysaa Dagaal ka dhan ah Maandooriyaha isla markaana isla markaa golaha wasiiradu waxay ku bilaabayaan tijaabo daroogo leh weed gobolka ...
'Taasi waa wax kale gabi ahaanba!'
Ma aha dambi ka danbeeya wadajirka? Sidee ayay taasi uga dhex muuqataa caalamka?
Waxaan dooneynaa inaan baarno inaan daroogo jilicsan ka heli karno danbiyada iyadoo la sharciyeeynayo. Waxay ka mid yihiin noocyada daroogada ee fudud ee Sharciga Opium. Annagu keligeen ma nihin adduunka oo dhaha: waa inaan si fiican u eegnaa taas. Kanada, dhowr gobol oo Mareykan ah. Waa inaan si taxaddar leh u qabannaa, laakiin waa amar ka geddisan dawooyinka la soo saaray. '
Akhri qodobada oo dhan Volkskrant.nl (Xigasho)
Looma baahna imtixaanka xashiishka ee ardayda Canadian-ka ah
Ciyaartoyda Canadian-ka ah ee jecel xashiishka cannabis waxay leeyihiin sabab ay ugu dabaal degaan. Mar dambe sii socon maayaan ...
Ketamine-da ma ka caawin kartaa qabatinka khamriga?
Ketamine waxaa loo yaqaan daroogo khatar ah oo si isdaba joog ah loogu isticmaalo naadiyada iyo ...